ဒေါသ မဖြစ်အောင်နေပါ။ အဲဒီဒေါသက သင့်ကိုသာ နာကျင်စေပါတယ်။ - Tameelay
ဒေါသ မဖြစ်အောင်နေပါ။ အဲဒီဒေါသက သင့်ကိုသာ နာကျင်စေပါတယ်။
ကိုယ်အရင်ပါပဲ။ ပြီးမှ သူများတွေဆီ ကူးစက်တာပါ။
သူငယ်ချင်းကြားမှာရှိတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေ၊
မိသားစုကြားမှာရှိတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုသံယောဇဉ်တွေ၊
ကောင်းတဲ့စိတ်အရည်အသွေးတွေ၊ တန်ဖိုးတွေ၊ သိက္ခာတွေ၊
မိတ်ဆွေကောင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ၊ ဆရာကောင်းတွေ၊
ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ တကယ်တော့ ဘဝဆိုတာဟာ မမြဲတဲ့အတွက်
ဒေါသဖြစ်လာရင် ငါ့မှာရှိတဲ့ ကောင်းတာတွေအားလုံးကို
ဒေါသ မဖွဈအောငျနပေါ။ အဲဒီဒေါသက သငျ့ကိုသာ နာကငျြစပေါတယျ။
ကိုယျအရငျပါပဲ။ ပွီးမှ သူမြားတှဆေီ ကူးစကျတာပါ။
သူငယျခငျြးကွားမှာရှိတဲ့ ဖွူစငျတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားတှေ၊
မိသားစုကွားမှာရှိတဲ့ ဖွူစငျတဲ့ နှောငျဖှဲ့မှုသံယောဇဉျတှေ၊
ကောငျးတဲ့စိတျအရညျအသှေးတှေ၊ တနျဖိုးတှေ၊ သိက်ခာတှေ၊
မိတျဆှကေောငျးတှေ၊ သူငယျခငျြးကောငျးတှေ၊ ဆရာကောငျးတှေ၊
ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ တကယျတော့ ဘဝဆိုတာဟာ မမွဲတဲ့အတှကျ
ဒေါသဖွဈလာရငျ ငါ့မှာရှိတဲ့ ကောငျးတာတှအေားလုံးကို
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အကြံကောင်းတဲ့ ပျား ကျွန်တော်ကျိုင်းတုံ မြို့ကိုအလည်သွားရင်းနဲ့ ညပိုင်းမှာရပ်တော်မူဘုရားဆင်းတုတော်ကြီး သွားဖူးရင်း ဆင်းတုတော်ကြီးမှာ စွဲနေတဲ့ ပျားအုံတအုံကို တွေ့လိုက်ပါတယ်.. အဲ့ပျားအုံကိုတွေ့ပြီး စိတ်ထဲမှာ အတွေးတွေ တစီတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်.. ဟာာ..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာ ဘာထူးဆန်းလို့လည်းဗျာ..လို့ ပြောရင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်.. ဘုရားဆင်းတုတော် ပျားစွဲတာကို တွေ့ပြီး တွေးမိတာကတော့..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာမြင်ရလို့ လဒ်ပွင့်မှာတို့ …
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အကျယ်ဆုံးငိုသံတဲ့!
မိန်းကလေးများအတွက် ~~~~ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အကျယ်ဆုံးငိုသံတဲ့! မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ခုခုခံစားရပြီဆိုရင် စကားသိပ်မပြောချင်တော့ဘူး ပြောရင်လည်း မောတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူဟာ ဆိတ်ဆိတ်နေတာ ကျင့်သားရသွားလို့ပဲလား! နာကျင်တာ ကျင့်သားရသွားလို့ပဲလား! ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တာကို ကျင့်သားရသွားလို့ပဲလား! မိန်းကလေးတစ်ယောက် သင့်ကို မခေါ်မပြောတော့တဲ့အခါ တကယ်တော့ သူ ဒဏ်ရာနက်နက် …